21 no maty ary anjatony ny maratra tamin’ny fihovitrovitry ny tany mahery tao Albania · Global Voices teny Malagasy
21 no maty ary anjatony ny maratra tamin'ny fihovitrovitry ny tany mahery tao Albania
Nifampiresahan'ny Global Voices i Redi Muçi, injeniera nanatrimaso ny faharavana
Voadika ny 27 Novambra 2019 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Español, Shqip, Ελληνικά, Français, Italiano, srpski, 繁體中文, English
Fahasimbana nateraky ny horohorontany tao Durrës, Albania, tamin'ny 26 Novambra 2019. Saripikan'i Redi Muçi, nahazoana alalana.
Farafahakeliny 21 no maty ary mihoatra ny 600 no naratra taorian'ny horohorontany mahatratra ny maridrefy 6,4 nahazo an'i Albania ny marainan'ny talata 26 Novambra 2019. Ny foiben'izany dia tao an-tanàna seranantsambon'i Durrës, tokony ho 32 km avy ao an-drenivohitra Tirana.
Nampahafantatra ny Fanarahamaso ara-Jeôlôjikan'i Etazonia (USGS) fa nahazo ny firenena avy any amin'ny 20 kilaometatra lalina anaty any fihovitrovitra. Tsapa tany amin'ireo tanàna manodidina, ka anisan'izany ny renivohitra, ny hozongozona.
Raha maro no nikoropaka, dia maro no tafahitsoka tao anatin'ny korontan'ny fanorenana nidaraboka.
Mbola mitohy ny asam-panavotana. Mandritra izany fotoana izany ny olona misioka sary sy lahatsary.
Nangovingovitra ny fanorenana tao Shëngjin taorian'ny fihovitrovitry ny tany mirefy 6.4 nandòna an'i Albania. Hatramin'izao dia mponina 13 no maty ary 600 no naratra
Horohorontany tao Durres
Tatitra voalohany ny fahasimbana!
Nifampiresahan'ny Global Voices i Redi Muçi, injenieran'ny fanorenana sady profesora ao amin'ny Fakiolten'ny Jeolozia sy ny Harena ankibon'ny tany ao Tirana. Nanatrimaso ny taorian'ny horohorontany izy:
Ardi Pulaj (AP): Manao ahoana ny toedraharaha any amin'ireo toerana notsidihanao?
Nitsidika an'i Durrës aho fa tsy Thumana (Fushë Krujë). Ireo no toerana tena tratrany indrindra. Misy ny tahotra fa mbola ho betsaka ny niharamboina satria misy ny vaovao fa maro ny olona mbola voafandrika ao anaty korontan-javatra.
AP: Manao ahoana ny famalin'ny manampahefana amin'ny hamehana?
Mihetsiketsika mafy ny miaramila, ny mpamonjy voina, ny polisy, izay miatrika ny toe-draharaha teny amin'ireo sehatra ireo. Samy manao izay mety indrindra izy rehetra ireo, na dia hita aza fa misy olana amin'ny fitantanana ny toe-draharaha. Raha mihady amin'ireo korontana ry zareo dia misy ny olona tsy manao ireo fitafy fiarovana araka ny tokony ho izy toy ny aroloha sy ny fonontanana. Tahaka ny mahatonga anao hieritreritra izany fa tsy fantatry ry zareo izay ataon-dry zareo. Mino aho fa tsy ampy ny vondrona manokana nozarina amin'ny toe-draharaha tahaka izao.
Fahasimbàna nateraky ny horohorontany tao Durrës, Albania, tamin'ny 26 Novambra 2019. Saripikan'i Redi Muçi, nahazoana alalana.
AP: Ny zavatra hitanay dia maro ny trano potika. Inona ny azonao lazaina momba io toe-draharaha io?
Nihaona tamin'ireo injeniera izay nanombana ny fahapotehana aho.Tsy ampy ny isa. Matoky aho fa misy fahabangana ny drafi-panavotana manome lanja ny famaritam-paritra bitika ara-horohorontany (seismika), ny karazam-panorenana sy ny kalitaon'izy ireny. Misy ihany koa ny fahabangana amin'ny drafi-panavotana antsipirihany rehefa misy ny voina lehibe. Maro ireo fanorenana lehibe ahiana ho potika rehetra tratran'ny voina. Mampididoza izany ho an'ny mponina rehetra ary tsy fantatray hoe ahoana no hialana amin'ny toe-draharaha tahaka izany. Nandritra ny taona maromaro izay izahay nahita tranobe natsangana tsy nijerena masontsivana henjana amin'ny rafitra nanaovana azy sady tsy ampy fanadihadiana ara-jeolojia.
Nilaza ny praiminisitra Albaney Edi Rama fa efa mirotsaka avokoa amin'ny asam-panavotana ny andrim-panjakana rehetra raha niantso ny vahoaka ho tony izy. Niantso ny vahoaka hanampy ireo tratran'ny horohorontany i Lulzim Basha lehiben'ny fanoherana. Nataon'ny Filoha Ilir Meta misaona ireo saina ao amin'ny biraony “ho fanomezam-boninahitra ireo aina nafoy voka'ity voina nahazo ny tanindrazantsika ity,” hoy ny filazany.
Nanome baiko ny sekoly rehetra hikatona ny talata sy alarobia ny minisiteran'ny fanabeazana. Koa satria miatrika ny toe-draharaha ny firenena, dia mbola mitohy ny fahasimbana taorian'ny dona. Tonga avy any amin'ireo firenena manodidina, avy amin'ny Vondrona Eoropeana ary avy ao Etazonia ny hafatra firaisankina sy fanolorana fanampiana.